Frequency kushandura brushless mota--iyo sosi yesimba repamusoro-mbiri yekuomesa maoko
Sezvo chirevo chichienda: "Chigaro chakanaka chinofamba zvakanaka nebhiza", simba rinobva FEEGOO rekuomesa ruoko rinogadziriswa chaizvo izvo mamiriro ezvinhu aripo iye zvino - brushless motors, sezvatinoziva tese, makuru uye madiki brushless motors anoshandiswa mune akawanda In. munda weArtificial Intelligence (AI). Saka...
Kambani yeFEEGOO inoshuvira shamwari dzese mutambo unofadza weDragon Boat
na admin pa 21-06-12
duanwu festival mutambo wechiChinese wechinyakare unoitwa pazuva rechishanu remwedzi wechishanu wekarenda yeChinese. inozivikanwawo seyechishanu chechipiri. yave ichipembererwa, nenzira dzakasiyana, mune dzimwe nzvimbo dzekumabvazuva kweAsia zvakare. kumadokero, iyo inowanzozivikanwa sedragon boat festival. &n...
Nezve Jet Hand dryer
Nezve Jet Hand Dryers Jet Hand dryer inzira yakaderera uye ine hutsanana yekuomesa maoko. Yakatenderwa kushandiswa neWorld Health Organisation, Center for Disease Control uye Hurumende yeChina. Kune mhando mbiri dzakasiyana dzemawoko dryer. Chekutanga, iwo 'maoko mu' blade maitiro ayo anoomesa kumashure ...
FEEGOO sipo dispenser, ichiedza kudzivirira COVID-19
Automatic sensor soap dispenser yakananga tsananguro: 1. Microcomputer infrared otomatiki sipo dispenser, uchishandisa yakanyatso kusanganiswa yedunhu tekinoroji, yakavhurika refill interface, uchishandisa intelligent infrared sensor, kudzivirira kubata ruoko, kudzivirira hutachiona, shandisa 4 × 1.5V yakaoma bhatiri, yakakodzera kune vese. ...
Gore Idzva, kutanga kutsva
na admin pa 20-12-30
Nguva inofamba nekukurumidza, nekusaziva uye kusvika pakupera kwegore. Muna 2020, takasangana neCCIDID-19, asi tinotenda nekambani yemumwe nemumwe, iyo yakatisimbisa kuti tirarame panguva yakaoma. Bhero ra2020.2021 rave kuda kurira. Ndinovimba mucharamba muchitiperekedza mu...
Zhejiang Feegoo Technology Co., Ltd. Enda ku2020 CEC EXPO
na admin pa 20-12-21
Sezvo denda repasi rose reCCIDID-19 richiramba richipararira mhiri kwemakungwa, mabhizinesi ekutengeserana ekunze akatarisana nedambudziko re "kushomeka kwevashandi" muhafu yekutanga uye "kushomeka kwemirairo" muhafu yechipiri. Indasitiri yeChina yemwenje, senyika huru yekutengeserana kunze kwenyika, mu ...
Nzira yekudzivirira sei denda kubva kumunhu
na admin pa 20-12-14
Nekufamba kwenguva, 2020 igore rekuwana nzanga yakabudirira mune zvese. Vanhu vanofanira kufara uye kufara pamusoro peizvi. Kunyange zvazvo vanhu vachiri kunyura mumufaro weGore Idzva, hondo isina utsi yakatanga zviri pamutemo panguva iyo bhero reGore reRat rinorira. Nov...
Isu tinoshanda nesimba kudzivirira kubva ku2019-nCov, tinovimba zvigadzirwa zvedu zvekuburitsa sipo zvinogona kubatsira vanhu
na admin pa 20-12-08
Nyika pari zvino yabatwa nedenda reCoronavirus, mukuru mukuru weWorld Health Organisation akadaro, paakaratidza kushushikana kukuru nezve "nhanho dzinotyisa dzekusaita" mukurwisa kupararira kwechirwere ichi. Mumavhiki maviri apfuura, huwandu hwenyaya ...
Mawoko anoomesa maoko anoshanda sei, zvakadaro?
na admin pa19-10-15
Kunyangwe uchishanda muhofisi, kurovedza muviri panzvimbo yekutandarira kana kudyira muresitorendi, kugeza maoko ako uye kushandisa muomese wemaoko zvinhu zvemazuva ese. Kunyangwe zviri nyore kufuratira mashandiro anoita maomesa emaoko, chokwadi chinogona kukushamisa - uye zvinozoita kuti ufunge kaviri nguva inotevera yauchatiitira...
Iyo chiyero che brushless mota uye brashi mota
Zvishandiso zvema brushless motors zvinogona kushandiswa muindasitiri yemukaka, indasitiri yekubikisa nyama, indasitiri yekugadzira soya, indasitiri yekugadzira zvinwiwa, indasitiri yekugadzira bhekari, mishonga, fekitori yemagetsi, uye mamwe anodiwa akachena mashopu uye zvichingodaro, s. ..
FEEGOO Enda ku124th Canton Fair
na admin pa18-11-26
Iyo yechi124 (Matsutso) Canton Fair yakatanga muGuangzhou International Convention uye Exhibition Center. Zhejiang FEEGOO Technology Co., Ltd yakatora chikamu muCanton Fair nezvigadzirwa zvitsva zvepakutanga, zvakare ichikwezva kutarisa kwevatengi pasirese uye kuwana su...
Smart kubata Mhepo yekumhanya uye tembiricha yemhepo yakagadziridzwa Isa mifananidzo Yakavakwa-muHEPA https://player.youku.com/embed/XMzQ5OTE0NzM5Ng==